Observing the Script 1 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 8 December 2010 8 December 2010 Categories Discussion, Film Script Study, Reproduction
13 thoughts on “Observing the Script 1”
တဝကြီးရေးထားတာကို တဝကြီးဖတ်သွားပါတယ်ဆရာ 🙂
ဖတ်ကြောင်းပြ အလင်္ကာနဲ့တင် ပြီးရောလားဗျာ… ချိုသည် ခါးသည်လည်း မပြောတော့ တူညားမှာ တိုးလို့ တန်းလန်း… ငရဲကြီးတတ်တယ်နော်… 😦
8 December 2010 at 2:10 pm
အပိုင်း၁ ကနေ ၅ ထိသာဆိုတယ် ဖတ်ရတာ ဆန့်တငံ့ငံ့နိုင်လိုက်တာ ဆရာရယ်။ ကိုယ်လောဘကြီးတာလဲပါ ပါတယ်။ ဆရာသုံးသပ်ပုံတွေ အရမ်းကိုကောင်းပြီး ရုပ်ရှင်ရဲ့အသက် ပိုဝင်လာသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆို ဒီလောက် မမြင်နိုင်ဘူးလေ။ အရောင်ရဲ့အဓိပါယ်ကို ပြောပြသွားတာကြောင့် ပညာတိုးပါတယ်။ အဲဒီလို အရောင်ရဲ့အဓိပါယ်တွေသိရအောင် ဘာကိုလေ့လာသင့်ပါသလဲဆရာ။ ပန်းချီသဘောများလား။ နတ်သမီးရုပ်အကြောင်းနဲ့ ဆိုဖာထိုင်ခုံလေးအကြောင်းက ဆရာ့စာ ဖတ်မှသိရတာ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆို မချိန်ဆက်တတ်တော့ ဘာမှန်းသိမှာကိုမဟုတ်ဘူး။
ဘယ်မှာဖတ်မိမှန်းမသိတော့ပေမယ့် စာရဲ့အစမှာ နံရံပေါ်မှာ သေနတ်ချိတ်ထားရင် အဲ့ဒါကို ပစ်တဲ့အခန်း ပါကို ပါရမယ်ဆိုတာလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ အဲဒါမျိုးက စာ မှာတင်မဟုတ်ဘဲ ရုပ်ရှင်မှာလဲ လိုတာပါပဲနော်။ အကြွေစေ့လေးကလည်း ဆရာကြောင့်ပိုသဘောပေါက်သွားတာပါ။
ဒီကားအ စမှာကတည်းက Sam ရဲ့သူငယ်ချင်းကို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ သူ့ မျက်နှာမှာကို ကြောင်သူတော်ကြွက်သူခိုးပုံ ပေါ်နေတယ်။ ဒါရိုက်တာလူရွေးအရမ်းတော်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ သူသရုပ်ဆောင်ကောင်းတာလည်း ပါပါတယ်လေ။ အကြိုက်ဆုံး အခန်းက Sam လူဆိုးနောက်ပြေးလိုက်သွားပြီး မော်လီနား ပြန်လာတာရယ်၊ လူမည်း မင်းသမီးက အလှူငွေတွေများလွန်းလို့ ချက် ခ် လက်မှတ်လက်မလွတ်နိုင်ဖြစ်သွားရတာရယ်ပါ။
ဒီကားကိုနောက်တခါပြန်ကြည့်ရင် ဆရာ့စာကြောင့် ပိုပြီးတော့အသက်ဝင်မှာ သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြန်ကြည့်ဖို့ အားတော့ တော်တော်မွေးရအုန်းမယ်။
ဒီစာအတွက် ဆရာ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့တော့ နှိုင်းယှဉ်လို့ကိုမရပါဘူးဗျ…အခြေအနေ အချိန် ငွေ တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ လုပ်ပြနိုင်တာကိုး…မြန်မာကားကတော့ ဆူလွယ်နပ်လွယ်ပဲလေ…
သိပ်ကောင်းဖို့အတွက် ငွေသိပ်ကုန်မယ်…ပြန်ရမရမသေချာဘူးလေ…မြန်မာပြည်ကြီး တကယ်တိုးတက်ပြီးတော့
အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံနေပြီဆိုမှပဲ ဖာတစ်လုံးခေါင်းကြားတို့လို့ ၀လေးလုံးတို့လို ဗိုလ်အောင်ဒင် တို့လိုကားတွေ
တိုက်တန်းနစ်ထက် အများကြီးကောင်းပါတယ်…ဘာဆက်တင်မှမပါပဲ ရိုးရိုးကိုကောင်းနေတာပါ…
ဆရာဘာသာပြန်တာလဲ တကယ့်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပါပဲဗျာ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ဆရာ..
ှဆရာရယ် အကုန်ဆို..ကျနော်မှာဖတ်ရင်နဲ့မျောသွားတယ်။ ဆရာရယ်နားပူနားဆာလုပ်တယ်တော့မထင်ပါနဲ့။ ဆက်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်ဆရာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးတွေ ဆက်ရေးပါအုန်းလို့ တောင်းဆိုပါရစေဆရာရယ်။ ဒီဇာတ်ကား (Ghost) ကိုလဲဆက်ရန်ရှိသေးရင် ဆက်ပေးပါအုန်းဆရာ။ ကျနော်ကြိုက်လွန်းလို့ Print ထုတ်လိုက်ပီဆရာ။
အပင်ပန်းခံပြီး Print ထုတ်မနေပါနဲ့။ မဝေးတဲ့ ကာလမှာ စာအုပ်အဖြစ် ထွက်လာမှာပါ။ Ghost လို ရေးထားတာ မဟုတ်ပေမယ့် နောက်ထပ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း တချို့အကြောင်းပါ ထည့်ပြီး ထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၁ ထဲမှာ ထွက်လာအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ Ghost ရဲ့ ဆက်ရန်ကိုတော့ စာအုပ်ထွက်မှာပဲ ဖတ်ပေတော့လို့ ပြောရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေပါတယ်။ 😛
8 December 2010 at 10:27 pm
အစကတော့ ဆရာက ဒီဇာတ်လမ်းကို ဘလောဂ်မှာတင်ဖို့ ပရိတ်သတ်ကို သဘောထားတောင်းခံတော့ ကျွန်တော်က ရုပ်ရှင်ကိုစိတ်မဝင်စားတာနဲ့ ဘာမှဝင်မပြောဖြစ်ဖူး ။ နောက်ပြီး ဆရာတင်လိုက်တော့လည်းဖတ်ဖြစ်တာပါပဲဗျာ ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲဖူးပေမယ့် ဆရာအခုရေးထားတာလောက် နားမလည်ပါဘူးဗျာ …။
ဆရာရေးတာဖတ်ရမှ အရောင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုပါ နားလည်မိတော့တယ် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကြည့်ရင် ၁၀ ခါလောက်ကြည့်ရင်တောင် ဆရာရေးသလောက် အရသာရှိမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ နောက်အခန်းတွေ ဆက်ရေးပါအုံးဟု မ လိုက်ပါသည် ( အချွန်နှင့် ;P ) ။
ဆရာရေ … စာထဲမျောနေရင်း ဒေဝီဂျာနယ် ဆိုတာကို တွေ့ လိုက်ရတော့ ဖတ်နေတဲ့ အရသာ တော်တော်လေးကို ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားတယ်။
9 December 2010 at 6:35 am
ဆရာတော့ ငရဲကြီးတော့မယ်ထင်တယ်၊ တိုးလို့ တန်းလန်းကြီး ထားခဲ့လို့:))) ရေးထားတာ အတော်သဘောကျတယ်ဗျ။ စာအုပ်အဖြစ် အမြန်ထွက်လာပါစေလို့ဆုတောင်းနေပါတယ် ဆရာ။
ဆြာရယ် ဆန့်တငင်ငင် ဖြစ်သွားပီ ၊ ဒီ ဇာတ်ကား ကိုပြန်ဝယ်ပီး ကြည့်လိုက်အုံးမယ် ၊အရင် ကြည့်ပီးသားပဲ ။ဆြာ့စာကိုဖတ်ပီးမှ ပြန်ကြည့်မှ ဖြစ်မယ်လို့သိလိုက်ရပီ
ဆရာရေးထားတာတွေ အင်မတန်ကို ကောင်းပါတယ်ဆရာ.. ကျွန်မအတွက်လည်း ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မဲ့ ဇတ်လမ်းလေးပါ.. ကျွန်မကို သိပ်ချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ လိုဘဲ အဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီဇတ်ကားဟာ သူနဲ့ အတူတူ နောက်ဆုံး အကြိမ် ကြည့် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ်လို့နင်နဲ့ ငါ တစ်ယောက်ယောက် မတော်တဆ အရင်သေရင် အဲ့ဒီ့ဇတ်ကားလေး ထဲကအတိုင်းဘဲ နော်လို့ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပြီး ဒီဇတ်ကားလေးကို မမေ့နိုင်စွာ ဇတ်ကြောင်းလေးကိုအတူတူ အမြဲတမ်း တသသ ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ သူသေသွားခဲ့တာတော့ အခုဆိုရင် 15 နှစ်ကျော်ပါပြီ။ အဲ့ဒီ့ကတည်းက သူနဲ့ အတူတူ ကြည့်ပြီးကတည်းက ထပ်မကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ထပ်ပြီး ခံစားနိုင်တဲ့ နှလုံးသားမရှိတော့လို့ ပါဆရာ…
Thanks for aesthetic approach and inspiration on language proficiency, the most weakest skill of Myanmar is listening.
The rest of reading, writing and speaking skills are not too bad compared with Asean people.
Your post got remember me once movies reviewers Saya Shin Lone and Nay Oak (St. Paul).
22 December 2010 at 2:21 pm
အသက် ၁၀ နှစ်လောက်က ကြည့်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သေသေချာချာနားမလည်ခဲ့ပါဘူးဆရာ။ အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ အလင်းတန်းကလေးတွေကိုပဲ မှတ်မိနေတယ်။ ဆရာရှင်းပြတာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဖတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖတ်လာတာ စာက ဆုံးသွားတော့ ဟာ မပြီးသေးဘူး ဆိုပြီး ဆက် တငန့်ငန့်ကြီးဖြစ်သွားရော။ ဆရာကစာအုပ်ထွက်မှဆို ဘယ်လောက်ကြာအုံးမလဲဆရာ။ ဆရာ့စာဖတ်ပြီးမှ သူတို့တွေရဲ့ အချိတ်အဆက်ကောင်းတဲ့ အစီစဉ်တကျစီစဉ်မှုကို အားကျမိတယ်။ မှတ်သားမိတယ်ဆရာ။ ရုပ်ရှင် ၊ ပန်းချီ၊ စာပေ၊ ဂီတ ရှင်းလင်းချက်လေတွေကိုလည်း မှတ်သားရပါတယ်။ ဆရာအရေးကောင်းတာကြောင့်လည်းပါတယ်ဆရာ:)
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေကို အရာသာတွေ့နေတဲ့အချိန်လေးမှ ဆက်ဖတ်လိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဆရာ။ စာအုပ်ထွက်ရင်လည်း အားပေးအုံးမှာပါဆရာ:P
Previous Previous post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၇)